ဗမာ? ဗမာ? ဗမာ? အဖြေမရှိတဲ့ “ဗမာ” ဆိုတာ… | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Giving legal warning to Qing Minya @ Mote Kywal Thae @ Natalie Tan @ Kym Kkym
Interview withaRohingya Victim, U Tin Shwe »
Comment from Ko Htet Lu Aungဆရာဝင်လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး……
မူဆလင်ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်း လူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်….
.. ဒါကြောင့်မို့ …..
တရုတ်နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူကို တရုတ်မူဆလင်။
ဂျပန်နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူကို ဂျပန်မူဆလင်။
မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူကို မြန်မာမူဆလင်။
မြန်မာသဒ္ဒါနဲ့ ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် ပေါင်းစပ်နာမ်လို့ ခေါ်တယ်။
ဟိုမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ တယောက်လာနေပြီလို့ ပြောတာဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးလာနေတာမဟုတ်ဘူး။
ရှေ့ နာမ် တက္ကသိုလ်က နောက်နာမ်ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူကို အထူးပြုတာ။ နားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်……..
One Response to “ဗမာ? ဗမာ? ဗမာ? အဖြေမရှိတဲ့ “ဗမာ” ဆိုတာ…”
December 24, 2014 at 3:57 pm | Reply
ဗမာလူမျိုးရဲ့ အစက တိဘက်ဒေသပါ။ အေဒီ ၅၀၀ ခန့်ကအခုတိဘက်ဒေသကို မွန်ဂိုတွေသိမ်းတော့ ဗမာဖြစ်လာမယ့် လူမျိုးစုဟာ တိဘက်ကနေ အခုကချင်ဒေသနားအထိရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ အောက်ပိုင်းကိုဆက်ဆင်းလာပြီး ပျူ မွန်တို့နေထိုင်ရာဒေသ အထိရောက်ရှိလာခဲ့ကာ ၄င်းတို့ထံမှ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ နဲ့ အနုပညာတွေ လက်ဆင့်ခံခဲ့ပြီး ဗမာလူမျိုးရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တိဘက်လူမျိုး ကချင်လူမျိုး နဲ့ ချင်းလူမျိုးတို့ဟာ ဗမာနဲ့ လူမျိုးတစ်အုပ်စုထဲက ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး ၄င်တို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေဟာ အချင်းချင်းအရမ်းဆင်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ဘာသာစကားအုပ်စု Sino-Tibetan ကဆင်းသက်လာကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ တိဘက်၊ဗမာ၊ကချင် နဲ့ချင်းဟာ ဆင်းသက်လာတဲ့ လူမျိုးစုအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။